जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भन्नुभयो, ‘सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइनेछ’ | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भन्नुभयो, ‘सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइनेछ’
जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भन्नुभयो, ‘सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइनेछ’
ESAHARATIMES Saturday, July 25, 20200No comments
काठमाडौं, साउन १० गते । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले वर्तमान सरकार यही गतिमा अघि बढ्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याईने चेतावनी दिनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सत्तारूढ दलभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा आईराखेको छ । यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ । लोककल्याणकारी सरकारको नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । यसको लागि हामीले सोच बनाईसकेका छौं ।’
उहाँले वर्तमान सरकार छ कि छैन् भनेर खोज्ने अवस्था रहेको बताउँदै यो सरकार कतैपनि नदेखिको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले कोरोनाले भन्दा बढी मानिस बाढि÷पहिरो र डुबानजस्ता विपत्तिमा परेर मरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हजारौं मानिसहरु घरवारविहीन भएका छन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? वर्षभरि नै सरकार सुतेर बस्ने हो ? जनताले सुखमा सरकारलाई सम्झिँदैनन्, दुःख पर्दा र आपतविपदमा नै सम्झिने हो नि, अहिले विपद्मा सम्झिँदा पनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन् । यो सरकार कहीँपनि सफल भएको छैन् ।’
सर्वोच्च अदालतले रञ्जन कोइरालाबारे गरेको फैसलाको सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर केही नेताहरुले र सामाजिक सञ्जालमा भएका टिप्पणीको उहाँले विरोध गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘म महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन् । कोर्टको निश्पक्षतालाई सबैले मान्नुपर्छ । न्यायमूर्तिहरुलाई विवेक प्रयोग गर्ने कानूनी अधिकार छ । यस सम्बन्धमा पूनरोवलकन गर्ने भनेर निवेदन दर्ता भएको कुरा आएको छ ।’
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर तपाईकै पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुृराम भट्टराईले माग गर्नुभएको छ नि ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘म कसैको दास होईन् । बाबुरामजीको कुरा उचित हो भने पार्टीमा छलफल होला । तर, मैले यहाँ अहिले मेरो व्यक्तिगत विचार राखेको हुँ ।’
उहाँले हालै युवतीमाथि भएको एसिड आक्रमणको घट्नाको घोर निन्दा गर्दै घट्नामा संलग्न दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो जघन्य अपराध हो । कानुनमा यसबारेमा दण्ड, सजायको व्यवस्था छ । तर, म भन्छु एसिड बिक्रि–वितरणमा कडा व्यवस्था गर्नुपर्छ । लाईसेन्सको व्यवस्था गरौं । यसको उपयोग र प्रयोजनबारे राम्रो व्यवस्था गरौं ।’
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरूङले आफ्नो पार्टी कुनैपनि हालतमा नफुट्ने दावी गर्नुभयो ।
नेकपा फुट्दा नेपालको राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने दावी गर्दै उहाँले अहिलेको अवस्थामा सबै राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
नेकपा एमाले नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको सम्बन्धमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिनु भएको अभिव्यक्तिबारे सोध्दा उहाँले भन्नुभयो, दल दर्ता भएको कुरा यो फ्याक्ट हो । त्यहाँभित्र अन्तरकुन्तरमा को–को सक्रिय थिए ? को–को सक्रिय थिएनन् ? भन्ने कुरा छलफल, अध्ययन र अनुशन्धानको विषय हो भन्ने लाग्छ । पार्टी अध्यक्षले अध्ययन गर्नुभएको होला। बुझ्नु भएको होला । बुझेरै भन्नुभएको होला भन्ने लाग्छ । एउटा नेताले बुझेको सबै कुरा कार्यकर्ताले पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन् । फ्याक्ट के हो भने नेकपा एमालेकै नाममा आयोगमा दल दर्ता भएको छ । किन दर्ता भयो ? भन्ने विषयमा निश्चयपनि प्रश्नहरु छन् । तर, तपाईले पार्टी विभाजनको कुरा गर्नुभयो, म पार्टी विभाजनको सम्भावना देख्दिन् । पार्टी विभाजन हुनुहुँदैन् । पार्टी विभाजनको वे बाट जानुहुँदैन् । विभाजनको वे बाट जानु भनेको के हो भन्दाखेरि यो डेमोक्रेसी सिद्धिने वेबाट जाने हो ।’
उहाँले पार्टीभित्रको विवादबारे छलफल र बहस भइरहेको बताउनुभयो । पार्टीको निर्णय सबैले मानेर नै अघि बढ्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । भारतीय मिडियाले नेपालबारे गरेका प्रचार अफवाहबाहेक अरु केही पनि नभएको उहाँको टिप्पणी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मीन बहादुर विश्वकर्माले वर्तमान सरकार चौतर्फी रुपमा असफल भएको दावी गर्दै सरकारको विकल्प खोजिनुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार कहाँ छ ? सरकार कहीँ पनि देखिएको छैन् । नेपालको सिमानाभित्र नेपाल सरकार छैन् । सरकार हामीभन्दा बाहिर छ । अहिले यत्रो बाढि÷पहिरो गएको छ, कोरोनाको महामारी छ, हत्या, हिंसा, बलात्कार, एसिड आक्रमणजस्ता घट्ना घटेका छन्, तर सरकार कहीँ पनि छैन् ।’
सत्तारूढ दलभित्रबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पको खोजिने काम भइरहेकाले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुको विकल्प नै नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
वर्तमान सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामपनि उल्लेख गरेर प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान सुनाउँदै विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘स्पष्ट बहुमतको साथ रहिरहेको सरकारको विकल्पको खोजि गर्ने जिम्मा पहिलो त सत्तारुढ दलकै हो । उहाँहरु अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजिमा आफैं लाग्नुभएको छ । आफैं त्यहाँ अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजि गर्ने निश्कर्ष निस्किसकेपछि आम जनताको तर्फबाट वैकल्पिक सरकार खोज्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पछाडि पर्दैन् । हामी समयको पर्खाईमा मात्रै छौं । अहिले हतारो गर्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दल वा प्रतिपक्षी दलको भन्दापनि सत्तारूढ दल स्वयमको हो ।’